Adobe jilitaankii Qaybaha waa version ah qaaddey-hoos ka mid ah Pro Adobe jilitaankii, loogu talagalay in ay laylis tifaftirayaasha iyo macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka isticmaala bilaabo weli waa wax yar adag tahay iyaga inay ka adkaadaan this video software tafatirka. Plus, Adobe waa shirkad in si joogto ah oo sii daysay updates in ay mararka qaarkood sababa barnaamijyada isticmaala 'si ay u joojiyaan oo shaqeeya. Sidaas darteed, waxay u baahan yihiin in ay ka heli kale oo fiican in la Adobe jilitaankii Qaybaha. In intan yar ee qoraal ah waxaan doonayaa in aan eegno 10 fiican ee Adobe jilitaankii Qaybaha kale oo kaa caawin kara inaad aad shaqo u sameeyaan.
1. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) - Best Qaybaha Kale
Samee filimada la yaab leh iyada oo video, audio & sawiro in kasta oo qaabab loo jecel yahay.
Edit video / audio / sawiro leh classic sida goo, kala & dalagga
Shakhsiyeeyo guriga video la qoraalka, filtarrada, kala guurka & dheeraad ah.
Waxay bixisaa sifaatka aad u sareeya sida sawirka-in-sawir, humaag, wareeg ah usii, ka horimaanaya iyo & dheeraad ah.
La wadaag filimada aad meel kasta, TV, YouTube, Facebook, iPhone & dheeraad ah.
Maxaad Dooro Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Editor video Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu sahlan waxaa u editor kasta haddii cusub ama soo maray. Feature ayaa hoos u jiitaa-n- ku siinaysaa maamulka buuxda video iyo iyo content audio.
Waa arrin aad u boosaska badan oo loo isticmaali karaa si ay u dhamaystiraan hawlaha ku rikoor waqti loo marayo qaababka ay tiro badan. Waa barnaamij ku caawiya, Sagna iman kara maankoodu hal abuur leh iyo nooleeyo muuqaal in fikirradooda.
Features badan oo Cool
Editor video ayaa qoreysa saamaynta kala duwan oo ka mid ah sawirka in awoodda sawir, ogaanshaha goobta smart u splicing muuqaal fudud, oo awood u leh inay audio muuqan gaar ah iyo video.
Marka tafatirka la sameeyo, waxaad si fudud u badbaadin karo video ah qaabab kala duwan, waxa ay wadaagaan on Qalabka telefoonada gacanta, iyo sidoo kale iyaga u geliyaan in ay Facebook, YouTube, oo ayan u hurin si ururinta DVD ah.
Sidee si fudud Edit Videos:
Si aad u dajiyaan aad video files, riix "Import" xitaa folder file oo ku wada shuban. Marka ay si guul ah ku shuban gal Album ah, kaliya jiidi oo hoos u iyaga oo ku Timeline video ah.
2. Basic video tafatirka, dalagga, isku shaandheyn, goo, kala
Double guji item video ah, oo aad furi doonaa video iyo guddi tafatirka audio. Halkan, waxaad isku shaandheyn karaa video 90 degree, qabsato dhalaalka, Saturation, bedelkeeda, gaabis ah ama dadajiso xawaaraha ciyaareed, dalagga si size oo ku habboon, ku dhow garoonka audio, mugga, libdhi gudaha / dibedda, iyo in ka badan.
3. Codso guurka, Intro / credit & Saamaynta kale
Waa quruxsan fudud si ay u horyaal, saamaynta iyo Intro / credits daro in filim aad isticmaalayso kale Adobe jilitaankii Qaybaha. Hit guurka, Text, ama Saamaynta tab kor ku xusan Jadwalka ah, ka dibna jiidi template aad jeceshahay u dhexeeya laba clips kasta video.
Haddii loo baahan yahay, waxa kale oo aad codsan kartaa a-dhow, Jump Goo, Janjeeri-Shift, Muuse, iyo Face-off aad video. Si tan loo sameeyo, kaliya ku dhufatey "Power Tool" kor ku xusan waqtiga iyo dooran saamayn aad u baahan tahay.
Ka hor inta dhoofinta, waxaad ku eegaan kartaa video cusub oo ku saabsan suuqa kala saxda ah. Markii wax walba oo ku qancay, riix "Dhoofinta" si ay u helaan suuqa kala saarka. Tani Adobe jilitaankii Qaybaha siisaa hab oo kala duwan si uu u badbaadiyo video abuurka iyo la wadaagto caalamka oo dhan. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa in gubi DVD disc ah u riyaaqayaa shaashadda TV ballaaran ama ciyaaryahan kasta DVD.
Hubi more kale oo kale oo ay ku Adobe jilitaankii Qaybaha hoos ku qoran.
2. Avidemux - Best Video ayeey Software
Avidemux waa Tifaftiraha video free sameeyey hawlaha goynta, Deji iyo shaandhaynta fudud. Tani waxay taageertaa dhowr nooc file, oo ay ku jiraan DVD MPEG files, AVI, MP4 & ASF, iyadoo la isticmaalayo codecs badan. Hawlaha heli iswada karaa iyadoo la isticmaalayo mashaariicda, scripting awood badan oo safka shaqada. Avidemux sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso audio ama video encoder hadda iyo sidoo kale Sifeeyaha goobaha in sidoo kale loo isticmaali karaa sida "profiles" dheeraad ah qaabab diirada qaar ka mid ah (tusaale ahaan loo maqli karo ee ku saabsan qalabka la qaadi karo), ama sida fursadaha encoder doorbiday (si aadan u baahan tahay inaad gacanta mar kale iyo mar kale dhigay).
3. VirtualDub Hab--Can badan Files
VirtualDub yahay qabashada video iyo utility processing muddo ka badan 32bit iyo 64bit ee dhufto ee Windows (ME / 98/2000 / NT4 / Vista / XP / 7), ruqsad ka heeysan License GNU Dadweynaha (GPL). Tani waxay ka maqan awood ah editor ujeeddada guud sida Adobe jilitaankii sixiddiisa, si kastaba ha ahaatee waa ay dardargelisay ee hawlaha toosan degdeg ah oo ku saabsan video. Waxaa kale oo uu helay awoodaha si loo farsameeyo tiro badan oo faylasha processing Dufcaddii iyo is kordhin karaa iyadoo 3aad xisbiga video filtarrada. VirtualDub waxaa ugu horrayn ku wajahan in ka baaraandegidda files AVI ah, xitaa boqno gooysaa kuwaasi way akhrin Kitaabkooda (oo ha qorin) MPEG-1 iyo sidoo kale xamili qaybood qaar ka mid ah sawirada BMP. Sidaas oo kale weeye mid ka mid ah ugu wanaagsan video Qabsashada Chine in ay eegaan.
4. Adobe jilitaankii Pro - dhisay Features la yaabka leh
Hadda, aad edit karaa video ka dhakhso badan ka hor iyada oo awood badan oo ku xiran Adobe jilitaankii CC. Brand cusub qaababka badan oo ka mid ah waqtiga uqaabaynta, kala astaynta jagooyinka midabka fududeeyey iyo maamulka warbaahinta wanaagsanaaday. Waxaad si PC wax u hagaagsan karaa tuuryo iyo goobaha aad edit bay wax markaana ay u helaan ay ku qaababka cusub marka la sii daayay. Your oo dhan adduunka hal abuur leh, waa hal meel. The Pro Adobe jilitaankii waa editor video customizable, xoog badan, iyo Fansaarada, kaas oo kuu ogolaanaya in aad xaalkaa aad jidka. Waxaad dajiyaan karaa iyo lagu biiriyo gebi ahaanba nooc kasta oo saxaafada, ka shot video ku saabsan phone in ceeriin 5K ama wax ka sareeya footage xallinta, iyo edit qaab hooyo oo aan xitaa lumin waqti kasta ee
5. Lightworks - Award ku guuleysto Video ayeey Software
Lightworks uu yahay quwad tafatir oo keena dabacsanaan iyo qabanin xawaaraha, gebi ahaanba la dhexgeliyey xubnaha kale ee qoyska Buuxi Iskaashi ah. Lightworks waa abaalmarinta ku guuleystay fasalka Tifaftiraha video Emmy iyo Academy isagoo in ka badan labaatan sannadood oo taariikh ah ee warbaahinta iyo warshadaha film. Iyadoo jaray filimo badan oo kale ayaa, Fiction tegey saxarka, shutter Island, Boqol, Martin Scorsese ee tegey, Boqorka ayaa hadalka, Fiction saxarka, Mission Impossible, Batman iyo Braveheart, waxa ka mid ah muujinta buuxda oo ka mid ah qalabka tafatirka - midig ka horumarsan ee falinjeeerka & maamulka warbaahinta, in saamaynta waqtiga dhabta ah iyo taageero stereoscopic in ka mid ah correctors midabka duwan. Lightworks ayaa hormartay saamaynta dhuumaha, oo isticmaalaya awoodda GPU. Iyada oo taageero u 2k ee workflows la saameynta waqtiga dhabta ah, waa app tafatirka aadka u horumarsan heli karo.
6. Windows Live - Kan sameeyey Movie - fuliyaan Multiple Tast
Windows Kan sameeyey Movie app ka dhigaysa movies gurigaaga gebi xiiso leh. Iyada oo kii iyaga uumay Movie ah, waxaa laga yaabaa in aad la abuuro, share iyo edit filimada aad xaq u kombiyuutarka. Waxa kale oo aad ku dhisi kartaa movie gaar ah leh qaar ka mid ah jiitaa dhibicyaha & mid aad u fudud. Waxaad tirtiri kartaa darbooyinka xun iyo sidoo kale waxaa ka mid ah qaar ka mid ah goobaha ugu wanaagsan in aad rabto. Ka dib markii in, waad kala qaybsan kartaan filimka iyada oo e-mail, Web, iyo CD. By isticmaalin wax codsiga xisbiga saddexaad waxa kale oo aad qaadan kartaa filimada aad sameeyey oo u celi DVD ah. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo badbaadin filimka dib u cajalad video camera aad si aad dib ugu ciyaari karo TV-ga ama on camera laftiisa.
7. iMovie - Video Sharing Diyaaradaha Simple
Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wada tuura qaar ka mid ah qodobada video-ga. Ama aad haysato waqti iyo rabto in aad ganaax-habayn edit kasta. Ama waxaad uun jeclaan lahaa inuu ku dhajisan dhex-ga ee hab aad ku dhajisan iyada oo heestii daboolayaa in Lugood. The barnaamijyadooda iMovie kuu ogolaanaya in aad taas samayn oo dhan - oo markaas wadaagi this. iMovie ka dhigaysa mid u fudud in ay caleenta iyo wadaagaan HD video in aad ku soo gani qalabka macruufka. Waxaad la xiriiri kartaa clips aad doorbiday in filimada wada sugayo oo Hollywood style ee isjiidka. Waxaad daawan kartaa xubnihii sayidkiisa mini meel la Tiyaatarka iMovie ah. Qaar ka mid ah qasabadaha, mariya, oo aad qarka u saaran Ciyaar weyn ee guriga.
8. VideoLAN Movie abuura - Imaanshaha Soon Iyadoo qaar ka mid ah muuqaalada cajiib ah
(VideoLAN Movie abuura ama VLMC waa barnaamijka free video tafatirka, siinta qaababka si aad u hesho filim tayo semi-xirfadeed, si kastaba ha ahaatee iyadoo ujeedada ah in ay sii joogaan user-friendly oo fudud Horumarinta. Oo ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan video adduunka, ku Media VLC Player, haatan ay bilaabeen mashruuc cusub oo rajo leh:. yaqaan Videolan Movie abuura Waa "ididiilo" sababtoo ah Movie Videolan Abuuray weli waa marxalad hore ee horumarinta From ku dhiirigelinayaan in uu, waa kaliya in la sii daayo pre-Alfa ah, iyo dad badan. Tilmaamo muhiim maqnaa & badan cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay si dhow u fiirinayaan ku yaal in qofna karin rabitaanka this! Imtixaanka Videolan Movie abuura waa tuurnimo. Program weli wuu ka rogrogmadaa & buggy, sidaas filan shilalka qaar ka mid ah.
9. PiTiVi - sameeyaan Dhowr Task In One Software
PiTiVi waa editor il furan, ku qoran Python oo ku salaysan ee GStreamer & GTK +. Qaadashada in account xaqiiqo ah in qof kasta oo aan leeyahay aqoon la mid ah tafatirka video ah, oo midna la mid ah shuruudaha, PiTIVi siinaysaa siyaabo badan oo ka mid ah bedelayaan iyo in la abuuro waqtiga. Kuwaas oo isugu jira aragtida xog fudud in aragtida tafatirka buuxa (ama View Complex) kuu gacanta guud ee tafatirka. PiTiVi encode laga yaabaa oo ay qabsadaan video iyo maqal ah, jar oo kala video clips, kor loogu qaado iyo jar audio & Gudaan mashaariicda ee qaab kasta oo waxaa taageera qaabka GStreamer. PiTiVi ayaa waxaa lagu daray by Kn (Dawladda) at 17/04/2009 iyo isbedelka ugu dambeeyey la sameeyey
10. Cinelerra - Best Free Video ayeey Software In Market
Cinelerra waa barnaamij aadka xirfadeed oo sare video tafatirka, si kastaba ha ahaatee weli isha furan. Cinelerra xallin doonaan 3 hawlo muhiim ah: Qabsashada, compositing iyo tafatirka. Waxaa jira xad u lahayn in ay xal video sidaas haddii ay tahay heerka ama HD ma jabna ee Cinelerra. Cinelerra had iyo jeer uu ahaa mid xor ah oo si hadhaan tan iyo horumarinta shaqeynayaan si dhow ula shirkadaha dhaqanka farsamo design & saarka iyo warbaahinta iyo shirkadaha wax soo saarka baahin oo dhan oo ay la socdaan Artists Madaxa Bannaan & casriga ah si ay u soo qaar ka mid ah awoodaha cusub oo ka shaqeynayaan sare. Waxaan ognahay in Cinelerra ma u san yahay, si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid madal in aan wada dhisi karaa si ay u sameeyaan naga istuudiyaha madax banaan iyo xirfadeed.
Hel clip Converter Alternative ee Best
> Resource > bedelan karo > Top 10 Adobe jilitaankii Qaybaha lagu bedelan karo